ဇွန် ၂၀၁၄ | NAB သတင်းများ | 2017 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဇွန်လ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဇြန္လ 2017
ရာထူး: တွဲဘက်ဗီဒီယိုလွှအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: MLB အဆင့်မြင့်မီဒီယာတည်နေရာ: MLB အဆင့်မြင့် Media မှာဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA အမေရိကန်, ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ပရိုတိုကောများနှင့် / သို့မဟုတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကွန်ရက်များကျော်ပရီမီယံဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအကြောင်းအရာများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြသည်။ မသာကျနော်တို့ဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘေ့စဘောဘို့ပါဝါ peerless မီဒီယာထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့တစ်ဦး (အောက်ပါမိတ်ဖက်များအတွက်အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများပေးပါဘူး ...
အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း GmbH ကဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်, နယူးဗန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လိုဗက်ကီယားထုတ်လွှင့်ရဲ့ HD ကိုစှမျးတိုးချဲ့
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဇွန်လ 30, 2017 - အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း GmbH, ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဥရောပရဲ့ဗွေဆော်ပေးသူတဦး, ဘုတ်အဖွဲ့ Alphaline A12, ထုတ်လွှင့်အပြင်ဘက်တွင်တစ် All-အသစ်က HD ကို (OB) ဗန်အပေါ် Riedel ရဲ့ MediorNet Real-time မီဒီယာကွန်ယက်ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် အဓိကလိုဗက်ကီယားရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကိုTelevíziaMarkízaအားဖြင့်ပြန်တမ်း။ Riedel ရဲ့အဆိုတော်ဒစ်ဂျစ်တယ် matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်, MediorNet တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေး ...
InfoComm 2017 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲသုံးခု NewBay အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပြု IHSE ယူအက်စ်အေ
CRANBURY, NJ - ဇွန်လ 30, 2017 - IHSE အမေရိကန်နိုင်ငံ InfoComm 2017 မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲသုံးခု NewBay အကောင်းဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ DisplayPort များအတွက် Draco vario Ops + KVM သွယ်တန်း AV စနစ်နည်းပညာအားဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်နေစဉ်ကုမ္ပဏီ၏ tera Viewer ကိုဆော့ဖ်ဝဲ, အစိုးရဗီဒီယိုနှင့်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာနှစ်ဦးစလုံးထံမှပြရန်အကောင်းဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထွက်ရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ် KVM များအတွက်ကိုက်ညီတစ်ခုအလိုလိုသိ user interface ကို ...
EditFest LA ကမှာ One-On-One ကို, Conversation အတွက် Featured ရစ်ချတ်ဝါး, ACE အား
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာ့လူကြိုက်များတဲ့ပွဲက၎င်း၏ 10th တစ်နှစ် EditFest LA ကအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများအားဖြင့်တင်ပြတည်းဖြတ်ရေး၏အနုပညာနှင့်ယာဉ်၏နေ့-ရှည်လျားသောပွဲကျင်းပ, ဝေါ့ဒစ္စနေးရဲ့ဖရန့်ဝဲလ်ပြဇာတ်ရုံမှာသြဂုတ်လ 12, 2017 အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်ပွဲပြုလုပ်။ EditFest တစ် rapt ပရိသတ်ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာများရှယ်ယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနားမထောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, 2008 အတွက် LA ကအတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ...
StreamGuys In-မူလစာမျက်နှာရေဒီယိုများ၏အနာဂတ် Alexa ကျွမ်းကျင်မှုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူနားထောင်ခြင်းလူငယ်ကဏ္ဍဆီကူညီပေး
ကူညီပေးခြင်းထုတ်လွှင့်ဘူတာကိုပြန်ဒီနေ့ရဲ့ချိတ်ဆက်များ၏နေအိမ်များသို့ရေဒီယိုကိုဆောင် ခဲ့. - New Orleans အသိုင်းအဝိုင်းထုတ်လွှင့် WWOZ ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ယူလာဘို့အ Alexa လက်မှတ်ဝင်ငွေဘူတာရုံနှင့် StreamGuys-ဖွံ့ဖြိုးပြီးအသံဖြင့်ပေါင်းစည်းမှု BAYSIDE, California, ဇွန်လ 30, 2017 မှတဆင့်မတ်စပီကာမှ On-demand အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည် ပရိသတ်တွေ, ရှေ့ဆောင်အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်နှင့်မီဒီယာစီးဆင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေး StreamGuys ယခုထုံးစံ Alexa '' ကျွမ်းကျင်မှု '' ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ် ...
ရာထူး: ဆက်သွယ်ရေး Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Nashville Predator တည်နေရာ: Nashville TN အမေရိကန်ဆက်သွယ်ရေး: ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ - Nashville Predator (Nashville, TN) ယောဘခေါင်းစဉ်: ဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာဦးစီးဌာန: ဒါရိုက်တာဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ: ဆက်သွယ်ရေးယောဘကိုရန်အစီရင်ခံစာများကင်းလွတ်ဗိုလ်မှူးတာဝန်များ / လှုပ်ရှားမှုများ : ·အဖွဲ့သည်စာပမြေား (မီဒီယာလမ်းညွှန်, နှစ်ချုပ်, Preds စာနယ်ဇင်း) ၏ထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာအဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်·နေ့က-to-နေ့ကအသင်းမီဒီယာစပ်လျဉ်းနှင့်အဆောက်အဦလှုပ်ရှားမှုများတွင် Assist ...
ရာထူး: PRODUCTION ASSISTANT ကုမ္ပဏီ: Viacom တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန် Nickelodeon ၎င်းတို့၏နစ်ခ်ဂျူနီယာအမှတ်တံဆိပ်ကို Creative အဖွဲ့ join ဖို့ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်အထူးနှုန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ On-လေထုအဘို့အတိုပုံစံကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်, လူမှုရေးပလက်ဖောင်းထုတ်လုပ်သည်။ လေထုယနေ့အထိမှတဆင့်အဖြေရှာတဲ့အနေဖြင့်ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် - အသံဖြင့် directing, တည်းဖြတ်ရေးသား ...
ဗီဒီယိုကိုဦးစီးဌာန Manager ကို
ရာထူး: ဗီဒီယိုဦးစီးဌာန Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Live Nation Entertainment ကတည်နေရာ: အမေရိကန်ကယောဘဖျေါပွခကျြအခနျးကဏ်ဍတှငျကရမေလ: အဆိုပါဗီဒီယိုဦးစီးဌာန Manager ကိုအခန်းကဏ္ဍ TourDesign ကို Creative "TDC" မှာဗီဒီယိုဌာနကိုကြီးကြပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုမန်နေဂျင်းပါဝင်သည်နှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာနှင့် တွဲဖက်. အားလုံးကိုဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်မူ / အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် client များနှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 6812345 » 102030...နောက်ဆုံး»